MIVANTANA amin’ny 9 Martsa : Hiparitaka manerana an’i Amerika Latina ve ilay “Samonta Maitso” avy ao Arzantina momba ny zo hanàla zaza ? · Global Voices teny Malagasy
Halefa mivantana amin'ny Facebook Live, YouTube, Twitch amin'ny fiteny espaniôla
Voadika ny 05 Marsa 2021 16:26 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Français, Português, Español
Tompon'ny sary (Havia miankavanana): Romina Navarro ao amin'ny Global Voices; Lara Va tao amin'ny Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0); Juan Diez tao amin'ny Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).
Niteraka andiana adihevitra momba ny zo ara-pananahana nanerana an'i Amerika Latina ilay fanaovana ho ara-dalàna ny fanalànjaza nolaniana tany Arzantina tamin'ny Desambra 2020. Firenena marobe ao amin'ny faritra no mametraka ny fandraràna tanteraka ny fanalànjaza; ary niatrika fanehoankevitra nivaivay avy amin'ireo vondrona mpandàla ny aina izy io tany amin'ireo firenena hafa izay nanalalahana tanteraka na tamin'ny ampahany an'ilay fomba fanao.
Miaraha aminay ny 9 Martsa ao anatin'ilay farany indrindra amin'ilay andiana kaonferansa anaty tambajotra Global Voices Insights fanaonay mivantana, izay hisy andiana mpandray fitenenana handalina ny fiantraikan'ilay fanapahankevitra tao Arzantina any amin'ireo firenena sisa ao Amerika Latina, ary hiezaka hamaly ny fanontaniana hoe: Hiparitaka any amin'ny faritra ve ilay “samonta maitso’ avy ao Arzantina, hanova ireo lalàna sy fomba fisaina manodidina ny fanalànjaza?
Ilay fotoana, izay ho atao amin'ny fiteny espaniôla ary hoarindran'i Melissa Vida, toniandahatsoratra ho an'ny faritra Amerika Latina, dia hanomboka amin'ny 6 hariva UTC (12 hariva ao Mexico City sy Amrika Afovoany/1 pm ao Bogotá/3 pm ao Buenos Aires/7 pm ao Madrid), ary hanasongadina ireto manaraka ireto:
Anette Eklund, mpandika lahatsoratra no sady mpamorona votoaty, mpanao gazety, profesora ary mpikatroka sady mpiaro ny demokrasian'ny fiteny sy ny zon'olombelona; mpandray anjara ihany koa ato amin'ny Global Voices.
Vienna Herrera, mpanao gazety multimedia miasa ho an'ny trano famoahambaovao Hondura Contracorriente, mifantoka amin'ireo olana momba ny miralenta, ny zo ara-pananahana sy ny firaisana ara-nofo, ny “extractivism”, ny tontolo iainana ary ireo firafitry ny fahefana; mpikambana ihany koa ao anatin'ny tariky ny tetikasa “Tanin'ireo Mpanohitra,” tonga tamin'ny famarànana tamin'ny fifaninanana Premio Gabo 2020.
Gabriela Mesones Rojo, Venezoeliàna mpanao gazety sady mpanoratra, mpandrindra ny famoahana ny “Cinco8 and Caracas Chronicles“; mpandray anjara sy mpikaroka ao amin'ny Civic Media Observatory an'ny Global Voices.
Giselle Carino, Arzantina siantifika sady politisiàna ary mpikatroka sady Tale Jeneralin'ny IPPFRHO (International Planned Parenthood Federation, Western Hemisphere Region), rafi-piainana ara-boajanaharin'ireo feminista sy liampivoarana misy fikambanana miisa 26 mpiaramiasa avy ao an-toerana, tsy mitsaha-mitombo ary avy any Atsimo ny ankamaroany. Ny hitarika fiovàna ho amin'ny fitovaina lenta manerana ny Atsimo manontolo no iraka tontosain'i Giselle, izay vehivavy arzantina mahay ny siansa politika ary mpikatroka nahavita nanaporofo fa izy dia olon'ny fanovàna ary mpitarika mandòna be.
Maimaimpoana ary azon'ny daholobe arahana ilay fotoana, halefa mivantana ihany koa ao amin'ny Facebook Live, YouTube sy Twitch.
Manantena ny hahita anareo izahay amin'ny 9 Martsa amin'ny 6 ora hariva UTC (potsiro ity rohy ity hamadihana ny ora hifanaraka amin'ny faritra misy anao)!